13:28 21. August 2017
Maraakiib Isku Duqeeyey Dekedda Berbera Iyo Khasaarihii kala Gaadhay
Berbera(Yool)-Laba Markab, ayaa isku duqeeyey gudaha haabadda Dekeda Berbera, kaddib cillad farsamo-xumo oo ka timi Kabtanka soo xidhayey mid kamid ah labada Markab, iyo sidoo kale, jawiga cimmillada oo aan Wanaagsanayn xilligaa.
Labada Markab ee isku dhacay oo lagu kala magacaabo CMA Kaylas, oo ah nooca xambaara Koontiinaradda iyo MF Iimaan, oo isna ah Maraakiibta xamuulka adhiga qaada, ayaa sida dad goob joog ahi, u sheegeen Wargeyska Yool, waxa shilka isku dhaca labada Markab sababay marka midba gaarkiisa loo eeggo khasaare aan yarayn, isla markaana xayiri kara inay Maraakiibtani Safarradoodii si watan, hadii aan khasaaraha gaadhay la xallin, ka hor dhoofintaankooda.
Waxa kaloo, goob-joogayaashu intaa ku darreen in CMA Kaylas oo u Wakiil ka yahay Maamulaha Shirkadda Telesom Berbera oo isaggu ku xidhnaa Dekedda allabna laga roggaayey, sidaas darteedna khasaare weyni Shilkaas kasoo gaadhay, kaddib markii uu dalooshamay Taangiga uu ku qaato Shidaalka Kaydka ah, oo ku yaala labada jenbi ee Markabka mid kamid ah. Markabka kale ee MF Iimaan, oo isna uu Wakiil ka yahay Shirkadda Al-jaabiri ee rarka xoolaha, ayaa shilkaas waxa isna soo gaadhay khasaare aan yarayn, kaddib markii uu ka dalooshamay Taangiga Miisaanka Biyaha.
Inkastoo sida illuhu xuseen Markabka MF Iimaan sida qorshuhu ahaa la filayey in la raaro Xalay, hase-ahaatee khasaaraha Shilka kasoo gaadhay awgii aanay arrintaasi suurto-geleyn ka hor intaa aan la sammayn taangiga dhaawacu kasoo gaadhay. Masuuliyadda sababta Shilkan cidda leh ayaan illaayo hadda la kala caddeyn , hase-yeeshee dadka Khibradda u leh Curufal baxarka ama shuruucda Badda, waxay qaarkood masuuliyadda Eedda arrinkan dusha u saareen Kabtankii Wadday Taagii Jiiddayey Markabka MF Iimaan ee Dekedda lagu soo xidhayey, oo isaggu maamul ahaan hoos taga Waaxda Faraca Badda ee Dekedda Berbera ee Xukuumadda Somaliland maamulkeeda gacanta ku hayso.
Ma jir War ku saabsan Shilka labada Markab oo illaayo hadda kasoo baxay madaxa waaxda faraca badda ee Dawladda Somaliland, iyo sidoo kale dhinaca maamulka Shirkadda DP World oo iyaddu gacanta ku haysa Dekedda Berbera marka laga reebbo waaxda faraca Badda.
Xukuumadda, Guurtida Iyo Maxkamadda Sare oo Garab la Saftay, Khilaafkii Waakiilada-na Dab Kusii Shiday
“..Gudoomiye aan Sharci ahayni Golle ma Furi karo … Waayo? Hal Xaaran ahi, Niirig xalaal ah ma Dhasho..”
Xildh. Maxamed Faarax Qabile
“…Golluhuna Laba Gudoomiye ma laha, Hal Guddoomiye ayuu Leeyahay, Gudoomiyihiina waa BAASHE MAXAMED FAARAX, Annaguna Xukuumad ahaan isaga ayaanu Aqoonsanahay…”
“..Golaha Ciidamaddu Hanooga soo Baxan..”
Xildh. Abubakar Cabdiraxmaan Good
“..Maxkamadda sare Waxay Xukuntay waa Go’aan Qaran..”
Hargeysa(Yool)-Khilaafka golaha Wakiiladda ee ka dhashay mad-madowga iyo tuhunkii soo galay tiranka Codadka labadii Musharrax ee ku loollamayey buuxinta jagadda Gudoomiyaha golaha Wakiiladda, ayaa sida muuqata Xukuumadda Somaliland aanay diyaar u ahayn in is-af garad laga gaadho, sidoo kale Gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan (Saleebaan Gaal) iyo Gudoomiyaha Maxkamadda sarre Aadan Xaaji Cali ayaa geestooda muranka arrinkaa iska taagay dhinac, halkii ay ahayd inay Dawo-sharci ama Sulux arrinka ku fardaamiyan.
Guddoomiye Cirro oo ka Xogwaramay Kulan Asxaabta Mucaaridku la Yeelatay Wasiiro ka Socdey Dawladda Ingiriiska
Hargeysa(Yool)-Musharaxa Xisbiga Mu’caaridka ee WADDANI, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), ayaa faah-faahin ka bixiyey ujeedada uu daaranaa kulan asxaabta mucaaridku la yeeshay Wasiiro uu hogaaminayo Wasiir-u-dawlaha iskaashiga caalamiga ee Ingiriiska iyo Safiirka u fadhiya Soomaaliya.
Musharaxa Madaxweyne ee Xisbiga WADDANI, ayaa sheegay in kulankaasi labada dhinac ay kaga wadahadleen arimaha doorashada oo ay aad u danaynayeen iyo xaaladii abaaraha ee Somaliland soo martay.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), oo War-baahinta u waramayey kadib kulankaasi, waxa uu yidhi: “..Waxa Maanta inoo yimid weftigii ugu cuslaa oo ilaa Tobaneeyo Wasiir ka koobnaa oo uu hogaaminayo Wasiiru Dawlaha Iskaashiga Caalamiga ah ee Ingiriiska oo uu ku jiro Safiirka Ingiriiska u qaabilsana Soomaaliya, agaasimaayaal ka tirsan dawlada Ingiriiska iyo kuwa deeqda-bixiya.
Waxay u yimaadeen Somaliland inay kala hadlaan guud ahaan arimaha doorashada, horuumarka iyo arimaha kala dhexeeya Somaliland. Waxaanu kala hadalnay arimaha doorashada khuseeya, waxa kale oo aanu kala hadalnay in loo gurmado dadkii abaaruhu ku dhaceen ee shacbiga Somaliland in aad iyo aad loogu soo gurmado noloshoodana dib loo soo celiyo, dhaqaalahoodana kor loo soo qaado, waxaanu kala hadalnay kaalmada iyo horuumarka Somaliland, kulankaasi waxa ka qayb-galay asxaabta Mu’caaridka WADDANI iyo UCID..”.
Dhinaca kale Musharaxa Madaxweyne ee Xisbiga WADDANI, waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha Walaalaha ah ee ku dagaalay Magaalada Buuhoodle, isagoo arimahaasi ka hadlayana, waxa uu yidhi: “..Waxaan baaq u dirayaa Shacbiga Somaliland ee ku nool degmada Buuhoodle ee Walaalaha ah waxaan ugu baaqayaa in dhacdadii halkaa ka dhacday ee dadku ku dhinteen in aynaan ka maraarmin qof kaliya oo inaga dhinta qof kaliya oo inaga dhaawacma. In ka badan Toban qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi dhex-maray labada beelood ee Walaalaha ah, waxaan u soo jeedinayaa in dagaalka la joojiyo in nabada la soo celiyo, in xasiloonida la soo celiyo qof kaliya oo aynu ka maarano Somaliland ma jiro, intii dhimatay Alle ha-u-naxariisto intii dhaawacantay-na illaahay caafimaad ha siiyo.
Waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka iyo dhamaan Somaliland ina la nabadeeyo oo beelahaa la dhex galo, waxaan ugu baaqayaa Xukuumaduna inay doorkeeda qaadato, mar labaad waxaan ku baaqayaa baaq nabadeed, walaalayaal colaada joojiya..”. Ayuu Musharax Cabdiraxmaan Ciro yidhi.
Afhayeen BUUBAA oo Cambaareeyey Xadhiga Xoghayaha Deg. Ibraahim Koodbuur Ee Xisbiga WADDANI
Hargeysa(Yool)-Afhayeenka Xisbiga WADDANI Ibraahin Mahdi Buubaa, ayaa cambaareeyey xadhiga Xukuumada KULMIYE ay kula kacday xoghayaha degmada Ibraahim Koodbuur ee Xisbiga WADDANI, Maxamed Cabdi Yuusuf Dheereeye oo lagu xidhay Magaalada Hargeysa.
Afhayeenka Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Ibraahim Mahdi Buubaa, waxa uu Xukuumada KULMIYE ugu baaqay inay degdeg xoriyadiisa ugu soo celiso masuulkaasi ka tirsan Xisbiga WADDANI oo la sii daayo.
“…Waxaan Cambaaraynayaa xadhiga Xukuumada KULMIYE ay kula kacday Xoghayaha Degmada Ibaahin Koodbuur ee Xisbiga WADDANI oo lagu xidhay Magaalada Hargeysa, waxaan ugu baaqayaa Xukuumada in deg-deg loo sii daayo, xoriyadiisana si bilaa shuruud ah loogu soo celiyo..”. Ayuu yidhi Afhayeenka Xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Ibraahin Mahdi Buubaa, waxaanu intaasi ku daray.
“…Maaha in siyaasiga iyo shacabka lagu xidho aragtidooda siyaasadeed, waxaana u damaanad qaaday shuruucda dalka in xoriyadiisa lagu xidhana Maaha..”. Ayuu yidhi Afhayeen Buubaa.
Mudooyinkii u dambeeyey waxa isa-soo tarayey xadhiga, cabudhinta iyo cago-juglaynta ay XUKuumada KULMIYE kula kacayso masuuliyiinta Xisbiga WADDANI ee gobolada dalka gaar ahaana gobolada Togdheer iyo Hargeysa.
Hadii talaabooyinka noocan ah ee ka dhanka ah Xisbiyada Mucaaridku ay sii socdaan xiligan ay Somaliland isku diyaarinayso doorasho Madaxtooyo inay gasho, ayaa waxay shaki galin karaan in dalka Somaliland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo si daahfuran ay xisbiyada Mucaaridku u helaan xuquuq la mid ah ta Xisbiga talada haya ee KULMIYE.
Halkan Ka Daawo Hanti Dhowraha Somalilan Oo Ka Hadlay Daynta $80 Milyan Ah Ee Ay Xukuumadda KULMIYAHA Cusub Ay Ka Dhaxashay Xukuumaddii Hore Iyo Arrimo Kale
KENYA:-Musharax Ralia Odinga Oo Shaaca Ka Qaadey Inuu Aqoonsandoono Somaliland Haddii Uu Ku Guulaysto Tartanka Doorashada
Newer PostMaraakiib Isku Duqeeyey Dekedda Berbera Iyo Khasaarihii kala Gaadhay
Older Post Dhibaatada la abuurey ama La Maamulay.